Muna Axmed Cumar: Aargoosi!
Waa cadaw wada nool, kama maaranto isna kama tago, adduunka ayay ugu jeceshahay isna iyada ayuu u necebyahay. Aragtidiisa way ku faraxdaa isna wuu ka naxaa. Maalin iyo habeen way raadisaa, mar kasta wuu ka gabadaa oo ka dhuuntaa, isaga ayay ku nooshahay, iyada ayuu ka noolaan waayay.
Haddana way wada noolyihiin midkoodna ma garanayo goorta ay isku hoy noqdeen iyo sida uu xidhiidhkooda cadawnimo ku bilaabmay, kaliya waxa ay ogsoon yihiin in ay cadow isu yihiin haba kala badnaato heerka cadaawadoodu e. Wuxuu ku garaadsaday iyada oo eryanaysa, iyadna hooyadeed bay ka baratay sida loo qabto cunahana loogu dhago. Hoygan iyadoo yar baa la keenay isagu barigaa muu dhalan balse waxa ku noolaa: hooyadii, aabbihii iyo walaalkii oo ay saddexdoodaba gacanteeda ku dishay.
Wuxu si fiican u sii xasuustaa dharaartii ay qudha ka jartay hooyadii oo cunto u soo wada, si wanaagsan buu u arkayay siday u dishay una feenfeenatay illaa ay dhuunta ku hubsatay. Maalintaas oo dhan wuu murugaysnaa oo qatanaa. Waxa kale oo aan maskaxdiisa ka bixin maalin uu dagaal ba’ani ka dhex dhacay qoyskiisa iyo iyada oo lagu dilay aabbihii adeerkii iyo waliba walaalkii. Oo ma maalin u iloobi karayaa? Wixii dhiig meesha ku daatay, siduu daqiiqad kaliya u waayay qoyskiisii iyo siday u faraxsanayd markay ka dheregtayba si fiican bay maskaxdiisa ugu sawirran tahay. Hadalladii u danbeeyay ee aabbihii ku lahaa qalbigiisa ayay ku suntan yihin.
“Aabbo gal guriga!.... Aabbo gal guriga!”, kalmadahaas oo aan afkiisa ka soo wada dhamaan waa tii qoorta kala maroojisay iyadoo dusha kaga fadhida.
Maalintaasi maalin madow ayay u ahayd isaga iyo ilmaadeeradii. Ubad ku nool quudka hadba loo keeno ayay ahaayeen, in la waalid tiray oo ay maantaba cidlo taagan yihiin ayay xaqiiqsanaayeen, oohin iyo murug ayay isla dul galuubsanaayeen. Habeenkaas ayay ahayd markii u horraysay ee ay ogaadeen cadawnimada xoogga badan ee ay u hayso, digtoonidii iyo feejignaantii ayayna illaa maanta oo sannad ka soo wareegay ku jiraan.
Maanta se in uu waynaaday oo xoogaystay wuu ogsoonyahay oo waa kaa kaligii-noole aan cidna u baahnayn noqday, wixii uu ka itaal roonyahay waa ka isba ku tiiqtiiqsada ee siduu doono ka yeela, marka uu illaa toban ka itaal yar habeenkii dhuunta mariyo ayuu intuu xoog is bido yidhaahdaa goormaad iyadana bakhtigeeda ka talaabsan!
Balse wuu ogyahay in aanay taasi suurto gal ahayn, ma cidbaa uga war roon awooddeeda iyo intay xoog leegtahay, is gaabinta iyo farsamada ay wax u disho ma cid baa uga sheekaynaysa sow indhihiisa kumuu arag oo isaga laftarkiisa dhawr cisho may sigin oo dirqi kaga muu badbaadin.
Isaga oo ogsoon xeeladaheeda dagaal iyo khibrada soo jireenka ah ee ay u leedahay dabargoynta wixii la cayn ah isaga, miyuu ku dhacayaaba in uu maalin kaliya hor istaago.
Caawa oo dhan foof uu ku maqnaa ayuu isagoo daal bastii ah ka soo hoyday goor habeen badh ah, afka waxba ma soo saarin oo gaajo darteed ayuu cagaha jiidayaa. Gurigiisii yaraa ee xumaa ayuu iska huluushay isaga oo aan cidna juuq u odhan, oo ma cid uu la hadlo ayaaba joogta guriga? Sow kaligii kuma dhex noola meeshan xun ee madow ee usgaga badan. Hadhaaga ka soo hadha ugaadha uu quuto ayaa qolkiisa buux dhaafiyay ur aad u qadhmuuna u yeelay!
Tiro ma leh inta jeer ee uu ku fikiray iskaga guur oo meel nolol dhaanta doondoono. Waa gurigii uu ku dhashay, ku barbaaray, hooyadii lagu hor xasuuqay, qoyskiisa badankiisana lagu tirtiray! Iyaduna jaar la tahay. Oo waaba yaabe maxaa jeclaysiiyay haddaa goobtan halista badan. Bal adba!
Caawa quus ayuu ka soo istaagay nolosha, gaajada iyo wehel la’aantu waxay galisay xusuus aad u dheer. Gurigani sida uu ahaan jiray ayuu soo xasuustay, sidii farxadda badnayd ee loogu wada noolaa intaan hooyadii iyo aabbihii ciida hoos marin, sida aan habeenna loo qadi jirin iyo siduu caawa u qatan yahay ayuu is barbar dhigay, sidii la isku weheshan jiray iyo siduu imika cidlada u yahay ayuu ka murugooday. Halistii in aanay wali dhamaan oo uu mari doono mar ay noqotaba halkii ay qosyskiisii mareen ayuu garwaaqsaday. Xusuusahan xanuunka badan qalbigiisa nabar ku yaalay ayay sii dhaawaceen kana dhiijiyeen. Arrin maalin aan fogayn maskaxdiisa ku soo dhacday ayuu caawa u helay waqti uu ka fekero, rogrogo isla markaana falanqeeyo.
“Waa in aad qoyskaagii u aargudaa!”, ayuu intuu giir iska kiciyay kor u yidhi.
Habeenkaas oo kaliya may ahayn markii uu bilaabay in uu ka fikiro siduu u dili lahaa iyada, qoyskiisiina ugu aargudi lahaa balse waxay u noqotay joogto oo habeen kasta marka uu jiifsado isagoo gaajaysan qosolkeedana halkaa ka maqlo ayuu intuu cadho darteed saro kaco maqsinkoo dhan ku wareega isagoo raadinaya xeeladdii uu ku khaarijin lahaa.
Sidii caadada u ahayd caawana wuu ku soo hungoobay wax uu soo quuto, Inta uu dalool ku beegan hoygeeda isha saaray ayuu fiiriyay, hurdo dheer ayay ku jirtay, waxa uu mar kaliya isha la helay weel ag yaalay oo ay caano ku jiraan oo markay ka dharagtay hambo ahaan u reebtay.
Gaajadii haysay ayuu aad u dareemay markuu arkay caanaha cidlada yaalla, dhareer aanu u badheedhin ayaa si degdeg ah uga soo daatay, isaga oo aan is ogayn ayuu afar talaabo qaaday oo isku qaaday dhankeedii iyo halkii caanuhu yaaleen, inyar marka uu u jiro ayuu hakaday
“Waar maad waalan tahay?!...Ma naftaada ayaad halaagaysaa?...Hadday baraarugto sow mar kaliya ku kala jabin mayso?”, ayuu naftiisii hungurigu qaaday ugu caqli celiyay.
Talo ayaa ku cadaatay wax uu sameeyo ayuu garan la’ayahay wuxuu taagan yahay meel u dhaxaysa gurigiisii iyo bartii caanuhu yaaleen iyadna jiiftay.
Talaabo ayuu hore u qaadaa markaasuu haddana dib u qaada, baqdin darteed ayuu gariirayaa, gaajo darteedna wuu is hayn kari laayahay, in haddii ay qabato uuna dib u neefsanayn wuu hubaa, caanaha macaankoodana wuu arkaa. Wuxu kolba gabbadaba waakan weelkii caanaha isagoo dul taagan is arkay mabuu sugine markiiba madaxa ayuu la galay markuu kala badh intii hore ugu sii jirtay weelka gaadhsiiyay ayuu intuu madaxa la soo kacay isha ku xaday iyadii oo talaabo wax ka yar u jirta weelka caanuhu ku jiro, mise wali way hurudaa oo khuurinaysaa waliba intuu farxad dhoolla caddeeyay ayuu madaxii mar labaad muquuniyay caanihii oo markan u diiday in ay dhibic weelka ku hadho.
Intuu xoog u neefsaday oo dibnaha carrabka mariyay ayuu kor u soo kacay isla markiibana fiiriyay halkii ay ka xigtay isaga oo huba in ay wali sidii u hurudo. Naxdin waynaa!, waaba meel madhan, oo maba jiifto!
“Oo bahashii imika uun huruday maxaa la haaday” ayuu kor u yidhi isaga oo fajacsan. Khatarteeda cidi ugama war roona, oo in ay hadii ay qabato dilayso wuu hubaa caawana waxaaba u dheer hoygeedii intuu ku soo doontay ayuu waliba caanaheedii ka laastay. Markiiba hareeraha ayuu eeg eegay hore iyo gadaal ayuu degdeg u fiiriyay haba ku sheegin waxaan mugdi ahayn ma arag.
Garaaca wadnihiisa ayaa kor u kacay oo xawli u shaqeeyay, candhuuftii ayaa ka dagi wayday cunihiisa, mugdi aanu qolka ku ogayn buu waxba ka arki kari waayay. Markuu ilaa dhowr iyo toban jeer marna gadaal iyo hor eegay marna hareeeraha eegay oo waxaan meel madow ahayn arki waayay, sanqadha geedaha dibada ay dabayshu ruxayso mooyee wax kalena maqli waayay ayuu isagoo sanqadha dhowraya aayar cidhibsaday oo u dhaqaaqay xagii uu gurigiisu ka xigay.
Irrida laga qalo aqalkiisa markuu marayo ayuu si kadis ah sanqadh u maqlay, degdeg buu gadaal u fiiriyay waxba arki waa markuu soo jeedsaday mise hadana sanqadhii mid la mid ah ayuu maqlay, si taxadir leh ayuu madaxii u jeediyay illaa uu si fiican u arkay wixii daba taagnaa.
Laba indhood oo aad toosh moodo oo ay galka ka saartay iyo gacan cidiyo dhaadheer oo ku soo maqan ayuu ku war helay, Isaga oo aan far dhaqaajin ayay sidii guri ku soo dumay gabigisiiba dusha kaga dhacday.
“Uuum, buquuq!”, cabbaar markii la isla cifanayay ayuu mar kaliya ka hoos siibtay isagoo dhiig meel walba ka da’ayo, siduu u ordayay ayuu dalam yidhi aqalkiisii. Intuu neef tuuray ayuu meel aad gudaafad moodo oo u ah sariir isku dhex tuuray.
Inkasta oo ay marka horeba habeen badh ahayd, intii ka dhinayd habeenkaa indho iskuma keenin ee wuxu ka fikirayay iyada iyo mugwaynida colaadda ay u hayso isaga iyo wixii la abtirsadaba.
“Caawa haddaad ka badbaaday naftaadu halis bay kujirtaa waa inaad ka feejignaataa” ayuu hoos iskugu sheegay.
Maalintii xigtay oo dhan wuu hurday gabbalku markuu dhacay ayuu indhaha kala qaaday oo intuu lugta oo dhaawac ba’ani kaga soo gaadhay weererkii xalay jiiday booqasho ku tagay guri ay degganaayeen ilmaadeeradii oo u dhawaa.
“Iska waran inaadeer, caawa ma nabad uun baad u socotaa?!”, ayuu waydiiyay saddex ay ilmaader yihiin koodii u waynaa oo albaabka ka furay.
“Waar waa lagu nabad la’yahaye, ma soo dhaafaa kadinka!”, ayuu si lama filaan ah ugu jawaabay.
Mar kaliya ayay soo eegeen kii albaabka ka furay maaha ee labadii kale oo ku fooraray hadhaa xayawaan bakhtiyay. Intuu sidii oday sagaashan sanno jiray taah ku fadhiistay bay iyaguna soo ag dageen
“Nimanyow caawa wax kale uma socon balse waxa xilligaa i soo saaray ee aan idinku imiday arrin danteena ah oo in aynu ka wada tashano ay habboon tahay”, ayuu qudbad u soo muuqata in ay dheertahay ku bilaabay.
Laba ka mida ilmaadeeradii oo ah labada waawayn isagana da’ahaan isugu dhow yihiin in waxa Cali caawa wadaa aanu sahlanayn bay ogaayeen oo intay dhagaha sifaysteen si warku ugu duxo soo dhawaadeen halkii uu fadhiyay, halka kii u yaraa llmaaderadiina hamaansi afka gacanta saaray.
“Waa kow”, ayuu ugu war celiyay kii u waynaa.
“Horta nimanyow waad ogtihiin gurigan aynu ku noolnahay waxa inaga haysta, cunto xumada ammaan darrada ayaa inagaga daran, oo in ay jiif iyo joogba inoo diiday waad ka warqabtaan, qoysaskeeniina halkay marisay waad ogihiin, xalayna aniga ayaa dirqi ku sigtay!” ayuu si cadho leh u yidhi.
“Inaga oo afar nin ah, miyaynu dili kari waynay oo waalidkeen miyaynu u aargoyn kari waynay!” ayuu ku soo gabagabeeyay.
Arintan oo mid wax ku ool ah saddexdodiiba ula muuqatay hadana mid ka jawaab celiya waa la waayay oo saddexdoodiiba intay madaxa ruxeen ayay foorarsadeen. Cabbaar markii la kala aamusnaa ayuu intuu sara joogsaday ku yidhi:
“Waa si fiican, waan idinka filayay tan oo kale in aydaan waxba ila qabanayn waxbana ku filnayn anba waan ogaa! wadkiina halkaa ku suga! balse anigu caawa ama iyadaa dhiman ama aniga!”
Ayuu hadalkii ku soo gunaanaday oo halka albaabka u dhaqaaqay.
“JOOG! Caliyoow…bal u kaadi!”, ayuu ku amray mid ka mid ah ilmaaderadii inta uu ka soo daba kacay.
“Waa runtaa, inaader uma dulqaadan karno intaa in kabadan!”
Heshiis ah weerar ka dhan ah iyada ayaa habeenkaa bartaa lagu kala saxeexday. Haddaba xoog hadday noqoto kama xoog wayna, oo saddexdooda iyo in ka badanba mar kaliya ayay canka dhigi karaysaa balse in xeelad lagu dilo loo baahan yahay bay isla afgarteen.
Xeelad noocma ah?!, Xeelad…xeelad… xeelad…Midba dhan buu u fikirayay,
“Fikrad baan hayaa!”, bay mar kaliya afartoodiba la soo boodeen.
“Aynu gubno”, ayuu kii u horreeyay soo jeediyay.
“Waa fikrad fiican lakin sidee ayaynu u gubnaa?!”
“Habeen iyada oo huruda ayaynu gubaynaa!”, ayuu yidhi kii u yaraa isagoo kalsooni muujinaya oo fikradiisa in la qaato raba.
“Hadii la gubo sow guriga oo dhan guban maayo oo hoy beeli mayno inaguna!”, ayuu kii dhexe ugu jawaabay.
“May, may jar baynu ka tuuraynaa”, ayuu Cali oo goorahanba aan doodda ku jirini yidhi
“Halkan guriga agtiisa waxa jira jar aad u dheer, oo qofka ka dhaca aan dib loo arag, markaa kaas ayaynu ka tuuraynaa?!
In ay fikradan Cali suurtogal tahay bay isla arkeen balse waxay is waydiiyeen sida looga tuuri lahaa! Oo ma bahasha xoogga intaa leeg bay jar ka tuuri karayaan?
Habeenkii odhan siday u muransanaayeen ayuu waagi dilaacay siduu qorshuhu ahaa ayuuna mid waliba ku dhaqaaqay.
Waa subax hore, qorraxdu mar hore ayay soo baxday oo dhulka iftiimisay, iyadu waxay wali hurudaa furaashkeedii oo yaalla meel ku beegan guriga badhtankiisa. Ma oga oo kama warhayso in maanta loo tashaday. Cali ayaa soo hor maray isaga oo aan gabbanayn, way dareentay sanqadha oo intay il kaliya kala furtay oo ay waxba arki wayday ayay hurdadii ku noqotay.
Mar labaad buu soo hormaray isagoo qoorta maroorinaya isha intay ku biniinisay ayay haw ku soo tidhi, orod ayuu miciinsaday way daba oroday iyagoo is daba ordaya ayaa kadinka islaantii guriga lahayd oo suuqa ka timid sallad ay sidatay la isla jiidhay!
“Qabo oo dil dulliga xun, maryihii buu naga dhammeeyoo naftiibuu noo keenee”, ayay tidhi islaantii oo u sacabatumaysa sida ay u eryanaysay isla markaas khudradii ay ka daadiyeen iska uruursanaysa.
Oo isaga dabargoyntiisu sow farxaddeeda maaha, maalin walba waxa ay hilibka iyo caanaha ugu keentaa waa in aanay xabbadi guriga ku hadhin, balse ma oga maanta in siday maalin walba ugu tashadaan isaga iyadana loogu tashaday maanta. Wax la is daba ordaba jarkii ayaa la gaadhay oo uu ka booday, way ka daba boodday oo ku dhacday bohoshii ay u diyaariyeen balse isagu xadhig ay ilmaadeeradii u dhigeen buu qabsaday oo ay ka soo jideen markiiba.
Sidii ayaa lagu nabadgalyeeyay oo ay farxad sacabka tunteen. Taariikh aan hore loo maqal in ay dhigeen bay is bideen. “Jiirar bisad dilay!”, waligeedba bisadda ayaa jiirka ka adkayd balse caawa iyaga ayaa hog ku hubsaday! habeenkii oo dhan damaashaad ayay ku jireen gurigii ayay dhex mushaaxeen meel walba way galeen, si xorriyad leh ayay wax walba u cuneen.
Islaantii guriga lahayd habeenkii way ka seexan wayday oo indho isku keeni wayday sanqadhooda awgeed intay soo kacday ayay u yeedhyeedhay bisaddii haba ku sheegin se cid la hadasha way wayday.
“Naa caawa halkay ka dhacday tii baasayd ee bisad ahayd!”.
Markay quus ka istaagtay doondoonisteedi ayay xaqiiqsatay in ayna caawa joogin guriga. Markayse ogaatay in aan bisaddi u joogin meel ay ka dhacdayba, iyagii oo aad mooddo inay soo badanayaanna habeen walba ay ka seexan wayday ayay bisad kale oo ay saaxiibbo ahaayen tii dhimatay guriga keensatay.
Gabalku markuu dhacay ayay intay isku soo wada baxeen bilaabeen wax raadiskii iyo ugaadhsigii, oo miyay warba ka hayaan in caawa cadaw u yuururo guriga dhexdiisa. Mid hadday dileen malaha in ay dhammaan wixii bisad dunida kor joogay dabargooyeen ayay is moodeen!.
Habeenkii oo dhan wax qub- qacdu guriga oo dhan ka dayaantoba subaxii xigay ayay islaantii oo urtooda sanka iska haysa xashiishka ku dartay maydkoodii oo shan kor u dhaafay!
FG: Sheekadan Aargoosi waxa ay ku guulaysatay kaalinta koowaad ee tartan la magac baxay ‘Maantaba Sheeko Keen’ oo ay soo qabanqaabiyeen ‘Akaaddemiyadda Akhriska iyo Qoraalka ee Himilo’ horraantii bishii Feebarwari, 2014. Hargeysa, Somaliland.
Posted by Muna Ahmed at 5:35 PM